कम्यूनिष्ट अड्डामा काँग्रेस नेतालाई प्रमुख अतिथि बनाएपछि.. | Citizen Post News
सिन्धुपाल्चोक । भोटेकोसी गाउँपालिका वडा नं. २ मा सोमबार राजनीतिक परम्पराको ठ्याक्कै विपरीत ढंगले एउटा कार्यक्रम सम्पन्न भयो । जहाँ जनप्रतिनिधि नेकपाका थिए । अनि, प्रमुख अतिथि र अतिथि काँग्रेसका नेताहरु । उक्त कार्यक्रममा स्थानिय वडावासीको प्रतिनिधिमूलक उपस्थिति थियो । कार्यक्रम स्थल छेउमा ९४ लाखमा निर्माण हुन लागेको वडा कार्यालय भवन शिलान्यासका लागि वडा कार्यालयले सबै तयारी पूरा गरेको थियो । वडाध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठ नेकपाबाट निर्वाचित हुन् ।
शिलान्यास गर्न प्रमुख अतिथि को आउँदै छ ? भन्ने खुलदुली स्थानियमा चलिरहेको थियो । सबैको कौतुहलता क्षण भरमै मेटियो जब शिलान्यासका लागि कम्युनिष्टका नेता नभइ नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत मञ्चमा प्रवेश गरे । तब स्थानिय अचम्मित भए । हेर्दाहेर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतले भवनको शिलान्यास गरे । वडावासीले ताली पिटे ।
श्रेष्ठमात्रै होइन वडाका पाँचै जनप्रतिनिधि पूर्वमाओवादीबाट अत्यधिक मत पाएर निर्वाचित भएका थिए । वडामा कांग्रेस तेस्रो दलको रुपमा थियो । भोटेकोसीको पाँच वडामध्ये सवैभन्दा पहिलो वडा २ को भवन शिलान्यास भएको छ । गाउँपालिका प्रमुख राजकुमार पौडेल र उपप्रमुख दाबुटी शेर्पा पनि पूर्वमाओवादीबाटै निर्वाचित हुन् । पौडेल र शेर्पा नेकपाका जिल्ला सदस्यसमेत छन् ।
उनीहरु भने दुवै जना कार्यक्रममा आएनन् । त्यसो त नेकपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभचिन्तक पनि कोही देखिएनन् । कार्यक्रममा काँग्रेस नेताहरुको भने बाक्लो उपस्थिति थियो । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. १ का सभापति बालकृष्ण बस्नेत, तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष दोर्जे लामालगायतका नेता कम्यूनिष्ट पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधिसँग मञ्चमा गफिँदै थिए ।
भवनको शिलान्यास गर्दै बस्नेतले कम्यूनिष्ट मत भत्काउन सुरु गरेको दाबी गरे । नेकपाले जिल्लामा पद बाँडफाँड गर्दा चित्त नबुझेर वडाध्यक्ष श्रेष्ठ असन्तुष्ट थिए । नेकपा भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष दाबी गरिरहेका श्रेष्ठलाई पार्टीले अन्तिम समयमा कुनै पदको जिम्मेवारी दिएन । तर, उनी कांग्रेस भने प्रवेश गरेका छैनन् ।